कृषि राज्य मन्त्री श्रीमानसहित हनिमुन मनाउन ब्राजिल, कृषिका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेनन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कृषि राज्य मन्त्री श्रीमानसहित हनिमुन मनाउन ब्राजिल, कृषिका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेनन
प्रकाशित मिति २ श्रावण २०७५, बुधबार १३:४० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मंगलबारबाट विदा भइसक्यो । तर, बजेट सक्न राज्य कोषको दोहन भने जारी नै छ । गतवर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको नाममा भ्रमणमा बजेट दुरुपयोग गर्न आर्थिक वर्ष सकिएपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीहरु र राज्य मन्त्री श्रीमान सहित विदेश भ्रमणका लागि दौडथुप गरिरहेका थिए । त्यस अन्तरगतका परियोजनाका धेरै कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन ।
राज्य मन्त्री रामकुमारी चौथरी श्रीमान सहित ब्राजिल भ्रमणको लागि भिषा लिन कर्मचारीहरु दौडथुप गरिरहेका थिए । यो असार मसान्तको अन्तिम दिन । धेरै कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणका लागि अन्य कर्मचारीहरुसँग विदा लिर्दै थिए । मिठो मिठाइ ल्याइदिने र ल्याउने कुरा भइरहेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रयाः सबै परियोजनाका कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा रहेका छन । यसै समयमा किसानहरु कृषि मन्त्रालय अन्तरगत प्याट परियोजनाले काम लगाएर अनुदान नदिदा आफुहरु निक्कै अप्ठारोमा पुगेको गुनासा लिएर मन्त्रालय धाइरहेका थिए । प्याट परियोजनाका कर्मचारीहरु पनि विदेश भ्रमणमा रहेका कारण किसानले गरेका कामको भुक्तानी समेत प्रभावित भएका छन । कर्मचारीहरु असार अन्तिममा पैसा सकाउन कै लागि अवलोकन भ्रमणका नाममा कर्मचारीहरु लगातार भारत र अन्य मुलकको भ्रमणमा निस्किँदैछ छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कर्मचारी अनावश्यक काममा विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको नियमलाई लत्याउँदै विदेश उडेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कर्मचारीको टोली पनि भारत उड्न तयारी गर्दैछ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विपरीत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार लेखेको पत्रलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालेर कर्मचारीको जम्बो टोली विदेश उडेको हो । मंगलबार र बुधबार मात्रै ३ पटक गरेर ६० जना कर्मचारी भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन मान्नु नपर्ने भनेपछि कर्मचारीको भ्रमण नरोकिएको हो । बुधबार मात्रै २३ जना कर्मचारीको टोली भारत भ्रमणमा गएको छ ।
हालसम्म ६० जना कर्मचारी ७ दिनका लागि भारत भ्रमण गइसकेको परियोजना स्रोतले जानकारी दियो । यो भ्रमणलाई कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले नै स्वीकृति गरेका हुन् ।
वाम गठबन्धन धरापमा: माघ २४ पछि प्रचण्डले डरलाग्दो निर्णय गर्ने, अाखिर किन गर्दैछन यस्ताे ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिवेला एउटा अर्को “बोल्ड डिसिजन” गर्ने तयारीमा रहेको खुलासा भएको…
नयाँ गुण्डाको उदय, दावाका ‘मुन्सी’ सत्यमानको दबदबा
काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको हिट लिस्टका गुण्डा हुन्, दावा लामा । प्रहरीको ‘क’ वर्गको सूचीमा रहेको दावाले महानगरीय…
दुवैका पति वैदेशिक रोजगारीमा, एउटै वडाका दुवै महिला बेपत्ता !
कपिलवस्तु । यहाँ एउटै वडाका दुई जना महिला बेपत्ता भएका…
प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज, केही दुब्लाए !
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा पूर्ण रुपमा सुधार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
छातीमा संक्रमण र चिनीको…
पूर्व सिडिओ र मन्त्रीका पिएको चर्तिकलाले छक्कै बनायो
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पदबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग हटाइएका विष्णुप्रसाद ढकालले कोषको कोटामा पत्नीलाई चीन घुमाउन…
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ…
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 368 views
एयरपोर्ट भन्सारमा सेटिङ 64 views
निर्मला प्रकरणमा एसपी विष्टविरुद्ध फौजदारी अपराध मुद्दा, थुनामा राख्ने बाटो खुल्यो 25 views
कांग्रेस महासमिति बैठकमा शीर्ष नेताबीच नै कुटाकुट ! 22 views